ကိုယ်မှကိုယ်တန်းတန်းစွဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုတန်ဖိုးထားတတ်ပါစေ – Trend.com.mm
Posted on June 23, 2018 June 19, 2018 by Shun Lei Phyo
ကိုယ့်ကိုသိပ်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးကိုယ်မှကိုယ်တန်းတန်းစွဲနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိနေပြီလား၊ တစ်ယောက်ပဲရှိပါစေ၊ သင်ဟာလူဖြစ်ရကျိုးအင်မတန်နပ်နေပါပြီ၊ လူသန်းပေါင်းများစွာထဲကမှသင်မှသင်ပဲတမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေတဲ့သူရှိပြီဆိုရင်တော့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ သင်ဟာဘယ်လိုနေရာယူနေလိုိ့လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ရအောင်….
ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တိုင်းကိုယုံကြည်မှုရှိပြီး ကိုယ့်ကိုဆိုဘာမဆိုပြောပြဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ တစ်ခြားသူထက်သင်နဲ့သာဆိုပြီးသူတို့ဘ၀တွေပိုပြီး လုံခြုံနွေးထွေးတယ်လို့ခံစားနေရတတ်ပြီး သင်ဟာသူ့ဘ၀အတွက်သိပ်အရေးပါနေတတ်ပါတယ်။
သူ့ဘ၀ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတော်တော်များများအကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုသင့်ကို အသိပေးပြောပြထားတတ်ပြီး သူလုပ်ဆောင်သမျှအရာတိုင်းမှာလည်းသင့်ရဲ့ဆန္ဒသင့်ရဲ့သဘောထားကို အလေးထားထည့်စဉ်းစားတတ်တယ်။ သူ့လုပ်မဲ့အရာဟာသူ့အတွက်ကောင်းနေရင်တောင်သင့်အတွက်အနည်းငယ်ထိခိုက်စေရန်လုံးဝရှောင်တတ်တဲ့သူမျိုးပါ။
ရှက်စရာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြားမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကအစ သင်နဲ့တိုင်ပင်ပြောဆိုဖို့ဝန်မလေးတတ်ဘူး။ သင့်အပေါ်မှာရှိန်တာတွေကြောက်တာတွေမရှိပဲ သင်ဟာသူ့အတွက်အားဖြစ်စေတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ တစ်ခြားသူတွေအတွက်သင်ဟာအရေးမပါရင်တောင်ပေါ့။
(၄) သင်နဲ့ပတ်သတ်ရင် စိတ်ဆတ်တယ်
ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေသာသည်းခံရင်ခံမယ်။ သင်နဲ့ပတ်သတ်လာလို့သင့်ကိုထိပါးပြောဆိုလာပြီ၊ သင့်ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီ အကျိုးယုတ်စေပြီဆိုရင်သေးသေးလေးအစ သည်းမခံတတ်ပဲ စိတ်ဆတ်တတ်ပါတယ်။ လူများအမြင်မှာပိုလွန်းတယ်ဖြစ်နေရင်တောင်သင်နဲ့ပတ်သတ်လာရင်သူရဲ့စိတ်ကိုက ဒီလိုဖြစ်နေတတ်ကြတာပါ။
သင့်ရဲ့တကယ်ပျော်ရွှင်မှုကဘာလဲ၊ သင်တကယ်လိုအပ်တာကဘာလဲဆိုတာကို စဉ်းစားပေးတတ်ပြီးသူ့အတ္တထက်သင့်ပျော်ရွှင်သာယာမှုကိုပိုပြီးဖြည့်ဆည်းပေးချင်တတ်ကြသူတွေပါ။သင့်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအမြဲကောင်းအောင်လိုက်ကူညီနေတတ်တဲ့သူမျိုးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
ဒီလိုချစ်သူမျိုးဟာ တစ်ရာမှာ တစ်ယောက်တောင်ရှိဖို့ခံယဉ်းတာမို့ဒီလိုလူမျိုးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အခါ သင့်ကိုတွယ်ကပ်နေရမလားဆိုပြီးမငြိုငြင်ပဲ သူတို့ရဲ့မေတ္တာကို အလေးနက်ခံစားသိရှိနိုင်ပါစေ...
ကိုယျ့ကိုသိပျကိုခဈြမွတျနိုးပွီးကိုယျမှကိုယျတနျးတနျးစှဲနတေဲ့လူတဈယောကျရှိနပွေီလား၊ တဈယောကျပဲရှိပါစေ၊ သငျဟာလူဖွဈရကြိုးအငျမတနျနပျနပေါပွီ၊ လူသနျးပေါငျးမြားစှာထဲကမှသငျမှသငျပဲတမျးတမျးစှဲဖွဈနတေဲ့သူရှိပွီဆိုရငျတော့ သူတို့စိတျထဲမှာ သငျဟာဘယျလိုနရောယူနလေို့လဲဆိုတာကွညျ့ကွညျ့ရအောငျ….
ကိုယျ့ရဲ့လုပျရကျတိုငျးကိုယုံကွညျမှုရှိပွီး ကိုယျ့ကိုဆိုဘာမဆိုပွောပွဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနတေတျတယျ။ တဈခွားသူထကျသငျနဲ့သာဆိုပွီးသူတို့ဘဝတှပေိုပွီး လုံခွုံနှေးထှေးတယျလို့ခံစားနရေတတျပွီး သငျဟာသူ့ဘဝအတှကျသိပျအရေးပါနတေတျပါတယျ။
သူ့ဘဝရဲ့အစိတျပိုငျးတျောတျောမြားမြားအကွောငျးအရာတျောတျောမြားမြားကိုသငျ့ကို အသိပေးပွောပွထားတတျပွီး သူလုပျဆောငျသမြှအရာတိုငျးမှာလညျးသငျ့ရဲ့ဆန်ဒသငျ့ရဲ့သဘောထားကို အလေးထားထညျ့စဉျးစားတတျတယျ။ သူ့လုပျမဲ့အရာဟာသူ့အတှကျကောငျးနရေငျတောငျသငျ့အတှကျအနညျးငယျထိခိုကျစရေနျလုံးဝရှောငျတတျတဲ့သူမြိုးပါ။
ရှကျစရာကိစ်စပဲဖွဈဖွဈ လူကွားမကောငျးတဲ့ကိစ်စတှကေအစ သငျနဲ့တိုငျပငျပွောဆိုဖို့ဝနျမလေးတတျဘူး။ သငျ့အပျေါမှာရှိနျတာတှကွေောကျတာတှမေရှိပဲ သငျဟာသူ့အတှကျအားဖွဈစတေဲ့သူတဈယောကျဖွဈနတေတျတယျ။ တဈခွားသူတှအေတှကျသငျဟာအရေးမပါရငျတောငျပေါ့။
(၄) သငျနဲ့ပတျသတျရငျ စိတျဆတျတယျ
ကနျြတဲ့ကိစ်စတှသောသညျးခံရငျခံမယျ။ သငျနဲ့ပတျသတျလာလို့သငျ့ကိုထိပါးပွောဆိုလာပွီ၊ သငျ့ကို အန်တရာယျဖွဈစပွေီ အကြိုးယုတျစပွေီဆိုရငျသေးသေးလေးအစ သညျးမခံတတျပဲ စိတျဆတျတတျပါတယျ။ လူမြားအမွငျမှာပိုလှနျးတယျဖွဈနရေငျတောငျသငျနဲ့ပတျသတျလာရငျသူရဲ့စိတျကိုက ဒီလိုဖွဈနတေတျကွတာပါ။
သငျ့ရဲ့တကယျပြျောရှငျမှုကဘာလဲ၊ သငျတကယျလိုအပျတာကဘာလဲဆိုတာကို စဉျးစားပေးတတျပွီးသူ့အတ်တထကျသငျ့ပြျောရှငျသာယာမှုကိုပိုပွီးဖွညျ့ဆညျးပေးခငျြတတျကွသူတှပေါ။သငျ့ရဲ့ကောငျးကြိုးအတှကျတဈဖကျတဈလမျးကနအေမွဲကောငျးအောငျလိုကျကူညီနတေတျတဲ့သူမြိုးဆိုလညျးမမှားပါဘူး။
ဒီလိုခဈြသူမြိုးဟာ တဈရာမှာ တဈယောကျတောငျရှိဖို့ခံယဉျးတာမို့ဒီလိုလူမြိုးပိုငျဆိုငျထားတဲ့အခါ သငျ့ကိုတှယျကပျနရေမလားဆိုပွီးမငွိုငွငျပဲ သူတို့ရဲ့မတ်ေတာကို အလေးနကျခံစားသိရှိနိုငျပါစေ…